Croix rouge Malagasy-Sinoa : nahazo fitaovana mitentina 700 tapitrisa Ar · Aponga
News Mada : A la une
Croix rouge Malagasy-Sinoa : nahazo fitaovana mitentina 700 tapitrisa Ar
1 minutes pour lire
Mifanome tanana ny Croix rouge sinoa sy ny Croix rouge malagasy. Namatsy fitaovana mitentina 700 tapitrisa ny sinoa ho an’ny CRM.
Notoloran’ny Croix rouge sinoa fitaovana mitentina 700 tapitrisa Ar ny Croix rouge Malagasy. Nahitana ordinatera sy ireo kojakoja miaraka aminy miisa 150 izany fanomezana izany. Teo koa ny ordinatera enti-tanana 20 sy «projecteur» 20 ary imprimante 20.
Natao hanampiana ny Croix rouge amin’ny fitantanana ny karazana loza voajanahary mateti-pitranga eto Madagasikara ireo fitaovana ireo raha ny fanazavan’ny masoivoho sinoa.
Mbola hitohy amin’ny sehatra hafa ny fiaraha-miasan’ny roa tonta raha ny fampanantenana hatrany.
Tetsy andaniny, nilaza ny filohan’ny Croix rouge eto Madagasikara fa hahazo ordinatera hahafahana miasa avokoa ireo rantsa-mangaikan’ny Croix rouge any amin’ny distrika 120. Entina hanatsarana ny asan’ny mpilatsaka an-tsitrapo manao ny fanisana ny traboina sy manao tatitry ny fahavoazana rehefa misy loza voanajahary miseho ireo fitaovana ireo.
Efa niorina tamin’ny 4 marsa 1904 ny Croix rouge sinoa tamin’ny alalan’ny vaomiera iraisam-pirenen’ny Croix rouge Shanghai. Anisan’ny mpikambana nanangana izany ireo mpanao politika sy mpandraharaha tao Shanghai.
Tafiditra tao anatin’ny fianakaviamben’ny Croix rouge iraisam-pirenena izy tamin’ny taona 1919. Am-perinasa hatrany ny ekipan’ny Croix rouge na amin’ny fotoan’ny ady na amin’ny fotoan’ny fahatoniana ao anatin’ny firenena.
Madaplus.info : A la une
Madagate : A la une
Madagascar SeFaFi: espérer contre toute espérance
Andasibe : babakoto 10, simpona iray, novonoin’ny mpihaza
Ino Vaovao : A la une
OLAN’NY FANANAN-TANY : Ny tsy fahafantarana ny lalàna mifehy no tena sakana
Chronique : poison à petites doses
L'express de Madagascar : A la une
Catastrophe – Une trentaine de maisons à risque sur la Haute
Ambohimiandra : lehilahy hita faty teo amoron’arabe
Ski / Jeux olympiques : Mialitiana porte drapeau